Waa kuma "Bin Laden-ka Myanmar" ee Muslimiinta "aflagaadeeyay" - BBC News Somali
7 Juunyo 2019
Image caption Ashin Wirathu ayaa dhibaato la kulmay markii uu weeraray Suu Kyi
Wuxuu masaajiddada ku tilmaamay inay yihiin "saldhigyada cadawga" isla markaasna Muslimiinta ugu yeeray inay yihiin "eeyo waalan". wuxuu ku eedeeyay Muslimiinta inay xatooyo iyo kufsi u geystaan haweenka u dhashay dalka Burma.
Image caption Boqolaal kamid Muslimiinta Rohingya ayaa u qaxay dhinaca Bangaladesh
Khudbadaha uu jeediyo wuxuu kusoo qaadan jiray sheekooyin ku saabsan diinta Buddhist isagoo "shucuur waddaniyad ah muujinaya".
Si deggan oo hufan ayuu hadli jiray markuu ka qeybgalayo shirarka jaraa'id, laakiin wuxuu u hadli jiray si carro leh marka uu ka qeygalayo munaasabadaha ka dhaca goobaha ay dadka isugu yimaadaan, haddalladiisa waxay abuurayeen kala qeybsanaan iyo Islaam naceyb.
"Ma yareysan kartid Maska si kasta ha u yaraado ee, Muslimiinta waxay la mid yihiin Maskaas," ayuu yiri Ashin Wirathu.
Xilliggaasi wuxuu ka dhawaajiyay inuu raadsanayo goob kale oo aan Facebook aheyn si uu go'aankiisa uga sii wato.
"Markii Facebook uu iga xirtay, waxaan ku tiirsnaan Youtube-ka balse dad badan kuma xirna, marka waxaan adeegsan Twitter si aan u sii wado howsha qarannimo ama qarameynta," ayuu yiri wadaadka.
Image caption Wirathu ayaa lagu tilmaama nin si weyn uga soo horjeeda muslimiinta balse waxaa uu ku anddacooday inuu difacaayo dhaqanka iyo diinta Buddhist
Bishii July ee sannadkii 2013-kii, wargeys lagu magacaabo Time magazine ayaa soo daabacay sawirka ninkan oo ku uu ku tilmaamay "Wajigga argagixisada ee Buddhist".
"Si khaldan ayaa la ii fahmay aniga, waa la i weeraray, waxaan filayaa in koox gaar ah ay warbaahinta u adeegsadaan inay i bahdilaan, waxaa xaqiiq ah in warbaahinta Online-ka ay maamulaan Muslimiin," ayuu BBC u sheegay sannadkii 2013-kii.
Waxaa lagu tilmaamay "Bin Ladenkii Buddhista" markii la baahiyay barnaamijkaas sannadkii 2015-kii, waana magac ay u bixiyeen warbaahinta reer galbeedka balse wuxuu diiday in magacaas lagu tilmaamo isaga.
Image caption Wirathu ayaa weerar afka ah ku qaaday ergeygii Qaramada Midoobey ee Myanmar,
Markii Qaramada Midoobey ay ergey gaar ah u dirtay Myanmar sannadkii 2015-kii, si ay usoo baaraan tacaddiyadda ka dhanka ah Muslimiinta laga tirobadan yahay, waxaa uu ergeyga ku tilmaamay "dawaco iyo qof jirkeeda ka ganacsato".
"Maalinta ICC ay halkan timaaddo... waa maalinta uu Wirathu qaadan lahaa qori," ayuu taageerayaashiia u sheegay waddaadkan, bishii Oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay.
Lahaanshaha sawirka Photoshot
Image caption Ololihii rabshadaha watay ee ka dhanka ahaa Muslimiinta Rohingya waxaa uu horseeday shacab badan ay dalkaas isaga cararaan
Wareysi uu siiyay wargeyska Guardian, 2017-kii, waxaa uu ku yiri "Aung San Suu Kyi waxay dooneysay inay caawiso dadka shisheeyaha ah ee Bengali balse waan ka hor istaagay."
Image caption Wirathu wadaadka muranka badan dhaliyay
Wirathu ayaa sidoo kale madax ka ah urur la yiraahdo "Ma Ba Tha" oo la aasaasay sannadkii 2014-kii, balse waxaa la mamnucay sannadkii 2017-kii.
Image caption Wirathu ayaa soo bandhigay sawirro muujinayo dhibaatada loo geystay muslimiinta dalkaas
"Waxay u labisataa sida haweenka xayeeysiiya dharka ee marsada waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan. Waxay mareysaa goobahaa iyadoo si la yaab leh u socota, kabo qoobab dhaadheer leh xiran oo qaar dambkeeda u muujineysa dadka shisheeye," ayuu yiri bishii April, xilli u la hadlayay tageerayaashiisa. Waxaa uu hadalkan ku waday hoggaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi.
Myanmar Rakhine: Kumannaan u qaxay xadka Bangladesh
Jabhadda Rohingya oo sheegtay in ay weerareen Militariga Myanmar